ह्याकर | मझेरी डट कम
त्यहा अँझै एउटा समस्या देखिन्थ्यो, त्यो के भने कम्प्युटर चिपलाई इन्टरनेट कनेक्सन तथा मोटरलाई विजुलीको सप्लाई दिन बाँकी थियो । त्यस बन्दुक भित्र रहेको चिपमा र मोटरमा विजुलीको सप्लाई दिनकोलागि यु. एस.वि. केवल मार्फत व्यवस्था मिलाए । उक्त बन्दुकको लेन्स भएको भागमा वेव क्यामरा जोडे । यसरी यु.एस.वि केवल (डाटा केवल) मार्फत बन्दुकमा (कम्प्युटर चिप, वेवक्यामेरा) इन्टरनेट कनेक्सन दिनको लागि मोवाइलमा जोडें ।
C++मा तयार गरेको प्रोग्राम रन गरें जसले बन्दुकभित्र रहेको मोटर चलाउन मद्दत गर्दथ्यो र बन्दुक पड्कीन्थ्यो । त्यस प्रोग्रामले इन्टरनेट कनेक्सन खोज्यो । इन्टरनेट कनेक्सन इनेब्ल गरी मोबाइलको IP Address राखी डिभाइस (बन्दुक) सर्च गरें । त्यो डिभाइस मेरो ल्यापटपमा देखियो ।
ल्यापटमा देखिएको Fire बटन क्लिक गरें । मेरो प्रयोगशालानै थर्किने गरी बन्दुकले आवाज दियो । (त्यस बन्दुकमा इन्टेरनेट कनेक्सनले जोडेपछि, संसारको अर्केा कुनामा रहेको ल्यापटपबाट उक्त बन्दुक चलाउन सकिन्थ्यो)
भीत्रबाट रक्षा दौडिदै आइन् ।
अविनाश तिम्रो खुसीको मुस्कान देख्दा त सफल भयौ जस्तो लाग्छ नि ? कानै नजिकै आएर फुस्फुसाइन् ।
ठिक भन्यौं, मलाई यो दिनको बर्षौदेखि त तलास थियो ।
बरु भन तिमीले यो बन्दुक लुकाउनको लागि मिल्दो टेबल बनायौं त ? टेबल बनिसकेको छ ।
यो टेबल त्यस घरको ठिक सोफाको सामुन्ने भित्ताको आडदिएर राख्ने बिचार गरेकी छु ।
राम्रो विचार, टेविल भित्र बन्दुक राखेर भित्ता कै आडदिएर राख्नु । हैन भने यो पड्किंदाको समयमा आड पाएन भने निशाना चुक्न सक्छ । गोलि निस्कने भागको ठिक अगाडिको टेवलको भागमा प्वाल पार्न लगाउन नर्विसनु नि, बाँकी तिमी बुझ्ने नै छ्यौ ।
त्यति पनि आफैले बुझ्न नसक्ने, त्यत्तिसम्म बुद्धु छु होला त ? दुवै आँखि भौं एकै ठाउमा खुम्चाइन अनि आँखाँको नानी दायाँ बाँया हल्लाउँदै मतिर प्रश्न तर्ेसाइन् ।
धेरैकाम सक्नु पर्ने छ आज मैले । म जान्छु पनि । (मलाई हात हल्लाउँदै रक्षा त्यो बन्दुक तथा सम्पूर्ण उपकरण बोकेर कारतिर लागिन )
मोबाइलबाट बच्चा खित्काछोडेर हासेको स्वर सुनियो । ल कसैले फोन गरेजस्तो छ । मोबाइल हेरें रक्षाले फोन गरेकिरहिछन् ।
"हेल्लो""त्यस व्यक्तिको घरको डेकोरेशन सक्कियो, टार्गेट चेक गर्नुभए हुन्छ । रक्षाले जवाफ दिइन
"थ्याङ्क अलट डिएर"
यत्तिका तयारी गरेपनि एउटा तयारी गर्न भुलेंझै लाग्यो । आइ पि हाइड गर्नु, आजै काम सक्नु पर्ने बाध्यताले आइपि हाइड गर्न सम्भव होला जस्तो लागेन । तैपनि हाइड गर्नको लागि अमेरिकाबाट संचालन गरिएको प्रोक्सी र्सवर प्रयोग गर्ने निधो गरें, जसले नेपालमै भए पनि कसैले खोज अनुसन्धान गरे भने पनि आइपि अमेरिकाको देखाउने छ । कम्युटरमा त्यस प्रोक्सि र्सवरको एड्रेस टाइप गरें । प्रोक्सी र्सवरमा एड्रेसबार देखियो । त्यस एड्रेसबारमा www ... com टाइप गरें । साइट खुल्यो ।
Fire Program क्लिक गरें
Enter your Password ल्यापटपमा म्यासेज देखियो ।
Password टाइप गरी इन्टर थिचें । प्रोग्राम खुल्यो ।
टार्गेट मेनु क्लिक गरी - वेवक्याममा क्लिक गरें ।
Target Found कम्युटरमा म्यासेज देखियो ।
ल्यापटपभित्र वेवक्यामको तस्विर हेर्ने भागमा हेरें एक मोटे सोफामा बसिरहेको देखियो । गोलि कता लाग्छ भनी त्यस वेवक्याममा देखिएको तश्विरलाई ठूलो (जुम) गरें । निसाना ठिक टाउकोमा लाग्ने रहेछ । इन्टर थिचें
स्क्रिनमा Fire बटन र अलि दाया पटि Cancle बटन देखियो । अलिकति पनि समय खेर नफाल्दै Fire बटन क्लिक गरें । वेव क्याममा केही देखिएन । केही क्षण पश्चात ल्यापटपको वेवक्याममा त्यस मोटे रगताम्य भई सोफामा लडेको देखियो
आँखा खुल्यो, वरिपरि प्रहरी विभागका विषेश व्यक्तिहरू रहेछन् । भर्खरै देखेका कुराहरू त अपराधी पत्ता लगाउनको लागि हिप्नोटाइज विभागका प्रहरीहरूद्वारा हिप्नोटाइज पो गरेका रहेछन् । सम्पूर्ण कुराहरू उनीहरूले थाहा पाइसकेको हुनाले, मेरो अपराध प्रमाणित भैसको थियो, मैले झुक्याउने कुनै ठाउँ नै थिएन ।
प्रधान मन्त्रीलाई किन गोली चलाउनु भयो - के रिसवी थियो तपाईको सम्माननीय प्रधान मन्त्रीज्यूसँग -तपाईलाई साथ दिने साथीहरू अरु कोको छन् त - एक प्रहरीले प्रश्न राख्यो ।
मलाई त्यो मोटेलाई गोली चलाएकोसम्म त थाहा छ प्रधानमन्त्रीलाई गोली चलाएको बारेमा केही थाहा थिएन । चुप बसें ।
केही क्षणको सन्नाटालाई चिर्दै अर्को प्रहरीले प्रश्न गर्योत । यो विशेष किसिमको सैन्य तालिम कहाँबाट सिक्नु भयो ?
उनीहरूले हिप्नोटाइज गरेर उकेलिएको शब्दभन्दा एक शब्दभन्दा बढी केही कुराहरू पनि याद थिएन । मुख बन्दै राख्नुभन्दा अरु विकल्प ममा केही बाँकी थिएन ।
यो राजनिटिक हट्या भन्ने प्रमाणित भे र पेठ्याउँछ । ओह इन्स्पेक्ट्र साप । एक प्रहरीले जवाफ दियो ।
शक्ति र सम्पतिको लोभमा तपाईले गलत बाटो रोज्नु भयो अविनाशजी । इन्स्पेक्टरले रवाफिलो स्वरले दुवै हात हल्लाउँदै धम्क्यायो ।
गन्तव्यमा पुग्न कुन बाटो ठिक कुन गलत भनेर अल्मलिएमा त गन्तव्य खित्का छोडेर हास्नेछ साब ।
शक्ति सम्पत्तिको लोभमा अपराधको बाटो समाउनु र्व्यर्थ छ । अपराधको बाटो सुरुमा जस्तै मखमली देखिए पनि आखिर यस्को गन्तव्य भनेको जेलको चिसो छिंडीसम्म मात्र हो अविनाशजी । नत्र तपाईं जस्तो मास्टर माइन्ड मेरो अगाडि निरिह देखिंदैन थियो होला ।
लगातार बर्षोको पानीले होला त्रिशुलीको ठाडो खोला उर्लेर अँझै बढी डरलाग्दो भएको देखिन्छ । छेउका किनाराहरू खेती योग्य जमिन बगाउँदै यो मेरै क्षेत्र हो भनी हुँकार छोड्दै निरन्तर वगिरहेको प्रतित हुन्छ । विचमा रहेको राजमार्गमा अन्त्यहीन गन्तव्यमा पुग्नको लागि वसमा सवार यात्रुहरू एक पछि अर्को निरन्तर दौडिरहेको झै देखिन्छ । लुक्नको निम्ति आड लिएको रुखको पातबाट तप्प पानी चुहीयो । चिसोले आँगै सिरिङ्ग भयो । रुखमा बसेका चराहरू चिर्र, चिर्र च्यार्र, उँक, उँक गरी कराउँदै कहिले उड्दै कहिले रुखको डालिमा बस्न लागे । चराहरूले पात हल्लाएर, पातमा रहेको पानीले मलाई न्रि्रुक्कै भिजाए । अगाडिरहेको सिस्नुको झ्याङ्ग आँखाले छिचोल्दै राजमार्गमा निहाल्दै थिएँ ।
२ जना प्रहरीहरू प्रहरीभ्यान तेर्स्याएर यता उता हेर्दै मलाई खोज्दै रहेछन् ।
"अविनाश यहाँभन्दा अगाडि भाग्नै सक्दैन ।
यहाँभन्दा अगाडिका सबै नाकाहरू बन्दछन् । " एक प्रहरीले आफ्नो साथीलाई आशय व्यक्त गर्यो ।
"अब यो जंगलमा कहाँ खोज्ने यसलाई । साँझ पर्न लाग्यो । फेरि मुसलधारे पानी पर्ला जस्तो छ । फर्कने होकी -" अर्को प्रहरीले मोवाइल हातमा खेलाउँदै आफ्नो आशय व्यक्त गर्योर । अब यीनीहरू फर्कनेछन् । भनी ढुक्क पर्न लागें तर ती प्रहरीहरू म भए तिरै पो आइरहेका छन् त । उनीहरू बिगरेर बसेको ग्यासको टयाङ्करको नजिकै पो आइ पुगिसकेका रहेछन् ।
खल्तिबाट मोवाइल झिकें त्यस मोबाइल हातमा खेलाउने प्रहरीलाई मोबाइल वेब को लिंक म्यासेज पठाए । "लौ मलाई म्यासेज आएछ" हातमा मोबाइल खेलाउने प्रहरीले आफ्नो साथीलाई भन्दै हातको इसाराले रोकिन लगायो । त्यस लिंकमा थिच्नासाथ एक किसिमको भाइरस डाउनलोड हुन्थ्यो । जसले अनावश्यकरुपमा विभिन्न प्रोग्राम रन गरेर त्यस भित्र रहेको व्याटि्रको इन्टरनल र्सर्किट तताउने गर्थ्यो । त्यस अवस्थामा कसैको फोन रिसभ गरे मोबाइल पड्कीन्थ्यो । डाउनलोड हुन सकिएछ । तिनीहरू अगाडि बढ्न लागे त्यसै बखत मैले त्यस प्रहरीको मोवाइल नं. डायल गरे मोवाइल रिरिभ गर्दै गर्दैन । अब नजिकै रहेको ग्यासको ट्रकमै जोडिन झै आइपुगे । त्यहाँबाट म लुकेको रुख केही टाढा टाढा मात्र थियो उनीहरूले राम्ररी निहालेमा मलाई राम्ररी देख्न सक्थे । डरले मेरो मुटु ढुक-ढुक हुन लाग्यो । चिसोले होला खोकी लाग्ला झै भयो, आफ्नो घाँटी आफैले अट्ठ्याए । फेरि त्यस प्रहरीको मोबाइल नं. डायल गरें । यस पाला त्यस प्रहरीले मोबाइल रिसिब गर्यो । "हेल्लो" मात्र के भनेको थियो । मोबाइल ड्वाङग् गरी पड्कियोसँगै "मरेनी" प्रहरीको चित्कार पनि । त्यसरी पड्केको मोबाइलले नजिकै रहेको ग्यासको ट्याङ्करमा आगो सल्कियो । टयाङ्करबाट ठूला ठूला लप्काहरू निस्केर ती प्रहरीहरूलाई बेरिरहेको देखें । "गुहार ... मरेनी ... बचाउनुस् ... आत्था, मरे नि ... आम्मा ... ए..आम्मा मरेनी ... बचाउनुस" विस्तार विस्तार उनीहरूको आवाज सुन्यमा विलिन हुँदै जाँदै थियो ।
लौ खतरा टल्यो । म राजमार्गमा निस्किएँ ।
पछाडिबाट कसैले रिवल्वरबाट फाइरिङ गरेको आवाज सुनियो । मैले आफ्नो स्थिरता गुमाए छेउमा रहेको ... त्रिसुली नदिको छेउमा रहेको बुटा समात्न खोज्दै थिए तर असफल । मेरो नाक र छात्ति त्रिसुली नदिको पानीमा बजारिन पुग्यो । नाकबाट, मुखबाट हुलुक्क ... हुलुक्क गर्दै पानी मेरो घाटितिर छिर्दै थियो ।
एक जोडि बृद्ध बृद्धा गुन-गुनाएको आवाज टड्कारै सुनिंदैछ ।
आ ... विस्कुन नसुकेर हो कि मिल चलाउन नजानेर हो । सबै चामल कुड्कै कुड्कै बनाइदियो । बृद्धा बोलिन ।
समय पनि त्यस्तै छ नि । रुन नजानेको पिन्चे जस्तो । घरी घाम लाग्छ, घरि स्यारारा झरी पर्छ । धन्न यत्तिको भएपनि भएछ । यसरी झप्सी परेकै परै भयो भने भोक-भोकै पो परिन्छ होला । बुद्धले जवाफ दिए ।
पछाडि करेशोमा रायो विउ छरेको थिएँ । यो झरिले कुहिन्छ पो होला । बृद्धा बोलिन । पल्लाघरे साइलाको त्यो माउ पोथी साखा सन्ताननै बोकेर सधैं यतै र्झछ । खोस्रेको खोस्रेकै । त्यो ज्यामाराजले पो केही बाँकिरहन नदिने भो । झरिलेभन्दा नि त्यो पोथिले पो खाइसक्यो होला । बृद्ध बोले । अलिदिन विचार गर्नु पर्छ उम्रेन भनी खन्दिनु पर्छ । बरु बार बार्दिने पो होकी कुख्राले दिक्कै पार्यो । बृद्धाले आफ्नो आशय व्यक्त गरें ।
अ ... बृद्धाले केही सम्झे झैं गरी बोलिन् । त्रिसुली खोलाँ माझिहरूले भेटेर ल्याएका ती बाबुलाई होस आउला जस्तो भाछ । हो र --- हषिर्त स्वरमा बृद्धले प्रश्न राखे । पातली छोरि भा भए अलि चाँडै निको हुन्थे कि बरा ... । त्यसको पनि यतिबेलै डाक्टरको परिक्षा रे । गोली निकालेर त्यसलाई पनि यति बेलै काठमाण्डौ लाग्नु पर्ने । हिजो मैले तेल घस्दिदा चोरी औंला हल्लाएका थिए । खुसी बृद्धाको स्वरमा प्रष्टै छचल्किरहेको थियो ।
हे इश्वर बरा त्यो बाबुलाई चाडै निको गर्दे । आकाशतिर फर्किदै इश्वर पुकार्न लागिन। १५ दिन भैसक्यो इन्तु न चिन्तु । सद्धे होकी मरेको लास पत्तो पाउन सक्या छैन ।
यो बाबुको आँखा त काट्ट िकुटी हाम्रै छोराको जस्तो छ नि ती बृद्धाले आफ्नो छोरालाई स्मरण गरिन । केही बेर सन्नाटा छायो । बृद्धले खुइए गर्दै लामो श्वास ताने । आफ्नो छोरा सम्झिए ।
आ ... त्यो पनि अम्रिकै भासियो । अब त फर्किन्छ होला भनी दिन गन्दा गन्दै । डाँडा माथिका घाम भैसक्यो । त्यसको अत्तो पत्तो छैन । याँ भए ... घर खेत गरेर खान्थ्यो कि । पर्देशमा ... खै ... के गरेर बस्छ होला ।
हत्याको योजना र त्यस मोटे अर्थात प्रहरीको भाषामा भन्नुपर्दा प्रधानमन्त्रीको हत्याभन्दा अरु कुनै पनि कुरा मलाई स्मरण नै छैन । म आफ्नो विगत सम्झन खोज्छु । त्यस घट्नाभन्दा अघिका दिनहरू याद गर्ने कोशिस गर्छु सबै कोशिस र्व्यर्थ । सम्झना केवल सुन्यता मात्र । मेरो मानसपटलमा मेरो बारेमा बताइदिनसक्ने एकमात्र व्यक्ति बाँकिरहेकी थिइन "रक्षा" फेरि उनी कहाँ बस्छीन, त्यसको बारेमा म पूर्ण रुपमा अनभिज्ञ नै छु । मेरो उद्देश्य केवल रक्षालाई खोज्नु मात्र बाँकिरहेको थियो । आफूलाई पहिचान गर्ने त्यसभन्दा अरु विकल्प औंशीको रात झै चकमन्न र अँध्यारो देखिन्थ्यो ।
कसैको न्यानो हातको र्स्पर्श मेरो निधारमा पर्यो् । म झसँग झस्किए ।
मलाई सेवा गर्ने वृद्धा रहिछन् । बाबुलाई कस्तो छ त अहिले बनावटी मुस्कुराहट ओठमा ल्याउन खोज्दै बृद्धाले प्रश्न गरिन ।
अलि निको छु आमा । मैले खोक्दै उत्तर दिए ।
मैले बोलेको आमा शब्दले बृद्धालाई अलि प्रभावित पारे जस्तो लाग्यो । आँखाबाट निस्किन लागेको आँसु बाहिर निस्किन नदिइकन आँखा भित्रै सुकाइन । बाबुलाई खोकी लागे जस्तो छ । "म बेसार पानी र बोजेको झोल बनाएर ल्याइदिन्छु । बस्दै गर्नुस है । बृद्धा जुरुक्क उठिन सारीको सप्को मिलाएर भान्छा घरतिर लागिन । म पनि बृद्धाको पछि लागें । बृद्धाले दुवै हात एक अर्कामा हिर्काएर थपडी बजाइन भान्छा घरको बिजली बत्ती बल्यो । एक क्षण त अलमल्लमा परें तर छेउको भित्तामा राखेको भ्वाइस रिकोग्नाजेसन बक्स देखेपछि बल्ल बुझें थपडि बजाए पछि त्यो भ्वाइस वक्सले थपडीको आवाज पहिचान गरी घरको विजली बत्ती बल्ने गर्दो रहेछ ।
बाबु हाम्रो छोरा ठ्याक्कै तपाईकै उमेर कै भयो - अहिले अम्रिकामा छ । काट्टी कुटी तपाई जस्तै देखिन्छ । तर बाबु फर्कने होस त्यसलाई कहिल्यै भएन । बृद्धाले मेरो आहाटले पहिचान गरिछन् सायद । पछाडि नफर्की कुरा सुरु गरिन । कुराकानी त फोनबाट हुँदो हो नि आमा । मैले जिज्ञासा राखें । पहिले पहिले महिना महिना दिनमा फुन गर्ने गर्थ्यो । कम्पुटरमा चिठी नि पठाउँथ्यो । पैसा नि मनग्य पठायो । तर अहिले हामीलाई विर्सर्ेस्तो छ । उतैको नागरिकता लिनेरे भनेर पल्लाघरे साइलोलाई भन्थ्यो अरे । वर्षदिन जति भयो । न चिठि न फुन पत्तोफाँट छैन बाबु । बृद्धाले उत्तर दिइन ।
हर्ुर्केको छोरलाई घरमै बाँधेर राख्नु हुन्न आमा, बेलाँ-बेलाँ पैसा पठाएकै रहेछन्, फोन पनि गरिरहेका रहेछन्, यो वर्षढिला भयो र त के भयो र समय मिले त फोन गर्लान नि ।
आ ... बाबु हामी त डाँडा माथिका घाम, विरामी पर्दा तातो पानी ख्वाउने मान्छे पनि हुन्न त्यतिखेर यत्रो बडो घर दौडेर टोक्न आए झै लाग्छ । के गर्नु बाबु पैसाले, यसलाई सिरानी हाली सुतेर न रोग निको हुने रहेछ । न भोक नलाग्ने हुने रहेछ । र्झन लागेको आँसु सारीको एक छेउले पुच्छ्दै लामो स्वास तानिन । अब त ... त्यसको अनुहार पनि देख्न नपाई मर्छु झै लाग्न थालिसक्यो ।
बृद्धाले केही सम्झे झै गरिन । ग्यास माथिको दराज भित्रको सानो प्लास्टीकको भाँडोबाट एउटा कम्प्युटर चिप निकालेर दिइन बाबु यो तिम्रो शरिरमा गाडिएको अवस्थामा भेटिएको भन्दै थिई छोरी पातलीले ।
आमा हजुरको घरमा कम्प्युटर छ - हातमा कम्प्युटर चिप लिंदै मैले प्रश्न गरें । हामी त कम्पुटर चलाउन त जान्दैनौ बाबु तर बेलाँ बेलाँ त्यही पातलीले चलाउँथी, पर्ुवपटिको कोठामा छ ।
हो र आमा । म पूर्वतिरको कोठा तर्फलागें ।
कम्प्युटरमा त्यस कम्प्युटर चिप जोडें । कम्प्युटरले इन्टरनेट कनेक्सन माग्यो । ओके बटन क्लिक गरें । इन्टर योर पार्सवर्ड । कम्प्युटरले पार्सवर्ड खोज्यो । मलाई कुनै पार्सवर्ड याद नै थिएन । त्यसैले पार्सवर्ड क्र्याक गर्न घन्टौ मिहिनेत गर्नु पर्योस । अन्तमा सफल भएँ । त्यहाँ रक्षाको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी राखिएको रहेछ । त्यो जानकारी नोट गरें । अरु पनि जानकारी केही पाइन्छ कि भनेर यता उता क्लिक गरी हेर्दै थिएँ कम्प्युटर ह्याङ्ग भयो ।
एक्कासी बाहीरबाट घरभित्र राइफलबाट गोलीको वर्षा हुन लाग्यो । बृद्ध बृद्धाको चित्कार सुनियो । म झटपट भान्छा घर तर्फलागें । बुद्धा छटपटाइरहेकी थिइन । मलाई देख्नासाथ सिथिल भइन् । आफ्नै अगाडि बृद्धाको मृत्यु देखेर मेरो मन भक्कानिरहेको थियो । कसेर कराउँ कि टाउको भितामा ठोक्काउँ । के गरौं के गरौं मैले सोच्नै सकिरहेको थिएन । मन तेसै एक तमासको भैरहेको थियो । पुरै सरिर रिसले थर्रर कामिरहेको थियो । आफन्तको मृत्युले मानिसलाई कतिसम्म चोट पुर्याोउँछ भनेर बल्ल त्यसबेला मलाई चेतना भयो ।
ती हत्याहरूसँग बदला नलिइ नछोड्ने दृढ अठोट लिए । बृद्धाको लासबाट उनको मोबाइल झिकें । दुवै हात पड्काएर मोबाइलमा रेकर्डगरी त्यो रेकर्ड मोबाइलको रिङ्गटोन बनाएँ । ग्यासको पाइप काटेर रेगुलेटर पुरै खोलें । ग्याँस पुरै कोठामा भरियो । घरको विजली बन्दगरी त्यस मोबाइल भ्वाइस रिकोग्नाजेसन बक्सको सामुन्ने राखि नजिकैको झ्याङमा गएर लुके । ती हत्याराहरू घरभित्र जाँदै गरेको देखिंदै थियो । एकहुल प्रहरी पनि त्यस घर भित्र जाँदै गरेको देखियो । मैले भ्वाइस रिकोग्नाजेसन बक्स नजिकै राखिएको मोबाइलको नं. आफ्नो मोबाइलबाट डाएल गरें । केही क्षण पछि त्यो क्षेत्र पुरै थर्कायमान हुने गरी सिलिन्डर विस्फोट भयो । पुरै घर सिसा झै चकनाचुर भयो । त्यहाँ भित्र रहेका हत्यारा तथा पुलिस सबै देख्दा देख्दै एकै चिहान भए । मैले इनिहरूले मेरोबारेमा पाएको जानकारीको बारेमा अनभिज्ञ थिए । सायद मेरो सरीरमा पाईएको चीप, जसमा रक्षाको जानकारी थियो । मैले कम्प्युटरमा लगाउनासाथ मेरो आइपि ट्रयाकिङ्ग गरिएको हुनुपर्छ ।
कम्प्युटर चिपबाट पाएको जानकारी अनुसार रक्षाको घर त यही हुनुपर्छ । वरिपरि पर्खाल लगाइएको बडेमानको गेटहुँदै घरको मुलद्वारसम्म पुगें । मुलद्वारको देब्रे भागको भित्तामा कुकुरदेखि सावधानको वोर्ड राखिएको रहेछ । दाहिने भागको भित्तामा विजली घन्टीको स्वीच । स्विच थिचें ।
नसमेटिएको चिसो कपाल झाँक्रो फिजाएझै देखिने गरी रक्षा बाहिर निस्कीन । कोहो -
मेरो मनमस्तिष्कमा रहेको एकमात्र अनुहार र अति प्रिय पनि । हो त्यही अनुहार हो यो त्यो । एक नजरमा चिन्न नसक्नु भन्नु आफ्नो महत्वपूर्ण अंग विर्सनुझै थियो मेरो लागि । उनलाई देख्नसाथ लाखौं प्रश्न मेरो मनमस्तिष्कमा उठेका कारण के भन्ने के गर्ने म अन्यौलमा थिएँ । बोल्न खोज्छु । तर शब्द निस्किरहेका थिएनन । आफू आफै भित्र उकुस मुकुस भैरहेको थिएँ । रक्षा मलाई एक टकले टोलाइरहेकी थिइन । जसले गर्दा मलाई थप संकटमा पार्दै थिए । उनले मलाई विर्सर्ीीकेकी त हैनन ।
"भित्रै आउँकी" मेरो शब्द निस्कियो ।
एकै शब्द नबोली हातको इसाराले भित्र आउने इशारा गरिन । कोठाको ढोका बन्द गरिएको आवाज सुनियो । अगाडि राखिएको कर्ुर्सीमा बस्न खोज्दै थिएँ । कसैले पछाडिबाट गह्रौ बस्तुले पिठ्युमा जोडले हिर्कायो । मेरो हात पछाडि लगेर टन्टनी बाधीयो । रक्षा रहिछन् ।
"कर्ुर्सीमा बस" मतिर घृणाको नजर फ्याक्दै रक्षा बोलिन ।
"के भयो र रक्षा आज तिमीलाई" रक्षाले जवाफमा कुनै जवाफ दिन जरुरी दिन सम्झिनन् । जवाफमा २ वर्षअगाडिको पुरानो पत्रिका टेविलमा
पत्रिकामा मोटो-मोटो अक्षरमा केही हेडिङ्ग लेखिएको थियो । "बेरोजगारीको कारण महिनादिनमा लाखौं युवा विदेश पलायन" यसको अलि तल अर्को हेडिङ्ग देखियो ।
"बेरोजगारीको कारण आत्महत्या"
त्यसको दायाँ भागमा "अनिश्चित कालिन नेपाल बन्दको आब्हान" "उत्पादन तथा शिक्षा क्षेत्रमाभन्दा हातहतियारमा खर्च गर्ने योजना" लेखिएको रहेछ । उत्पादन तथा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी नगरी हातहतियारमा खर्च गरे बेरोजगारी त त्यसै बढ्छ नि ।
अनायासै मेरो मुखबाट शब्दहरू निस्कियो ।
केही समय पछि आजै प्रकाशित पत्रिका टेविलमा फ्याकिन ।
"स्वदेशमा विभिन्न अवसरका कारण विदेशिएका युवालाई नेपाल फर्कन आव्हान"
"जापान तथा अमेरिकाका कामदारलाई भित्र्याउने तयारी"
"चन्द्रमा विभिन्न वस्तुहरूमा निहित अक्सिजन उत्पादन गरि, प्रयार्प्त अक्सिजन बायुमण्डलमा कृतिम रुपमा राखि बसोवासयुक्त बनाउने ठेक्का नेपाल सरकारले लिएको जानकारी"
अर्को समाचार थियो । नेपालकै अर्को प्रतिष्ठत कम्पनीले चन्द्रमाको पानीको उपयोग गरी सिचाई व्यवस्था गरी चन्द्रमा हरा भरा बनाउने जिम्मा लिएको रहेछ ।" त्यस्तै अर्को समाचार थियो । नेपालकै प्रतिष्ठित कम्पनिमध्येको अर्को कम्पनिले सेटेलेलाइट मार्फ चन्द्रमामा विजली वत्ति झलमल्ल पार्ने जानकारी राखिएको रहेछ । म चकित हुँदै रक्षालाई प्रश्न गरें ।
"२ वर्षै यत्तिको परिवर्तन -, विश्वासै गर्न नसकिने" मेरो प्रश्नको वेवास्ता गर्दै मेरोबारेमा जानकारी दिन लागिन
"तिमी अविनास हैनौै" उनको बोलिमा चिडचिडापन थियो ।
के भन्यौ फेरि भन त ।
हो-हो तिमी अविनाश हैनौ । रक्षाले फेरि दोहोर्याचइन । त्यसो हो भने म को हुँ त -तिमीलाई त्यसमोटे व्यक्तिलाई गोली हानेकोसम्म याद छ हैन त -
म चकित थिए । मलाई त्यतिसम्म मात्र थाहा छ भनेर यिनले कसरी थाहा पाइन । आर्श्चर्य हुँदै "हो" भने । त्यस पश्चात के भयो सुन्न चाहन्छौं । के भयो त त्यसपछि । त्यो प्रधानमन्त्री मारिएको थिएन । उसलाई हस्पिटल लगियो । विदेशबाट आएको डाक्टरको उपचारबाट पूर्ण रुपमा ठिक गरियो । त्यसपश्चात उसको अनुहारको प्लाष्टिक र्सजरी गरी उसको अनुहार अविनाशको जस्तो र अविनाशको अनुहार त्यस मोटे व्यक्तिको जस्तो पारियो । कम्प्युटरको सहायताले त्यस मोटे व्यक्तिको स्मरणशक्ति मेटाइयो । तत्पश्चात अविनाशको दिमागमा रहेको प्रधानमन्त्रीको हत्याको योजनादेखि गोली चलाएको सम्मको स्मरण तिम्रो दिमागमा सारियो ।
त्यसो हो भने २ वर्षअघिको प्रधानमन्त्री मै हुँ ।
हो हो तिमी नै आमेश्वरभाइ मल्ल हो । २ वर्षअघिको प्रधानमन्त्री । थुक्क हत्यारा । तिमेरु पापी हौ । तिमेरु सिधै नर्कमा जानेछौ । मेरो रिसको पारो नाघिसकेको थियो । मेरो हात नबाधिएको भए नाकमा पन्च हानेर धुलो चटाउँथे हुँला । तर दाँत बजाउनु सिवाय म के नै गर्न सक्थें र –
पापी कोहो ? एक हत्यारा कि ? हजारौं हत्यारा जन्माउन तयार पारिएको बातावरण ? दोषी को हो ? त्यस बातावरणबाट या समाजबाट तयार पारिएका हत्यारा कि त्यस्तो किसिमको बातावरण बनाउने व्यक्ति ? मानिस त केवल ४-५ लिटर रगत हाड-मासु र खकारको त पुत्ला होनी । हैन र - त्यसभन्दा बढी मानिसको शरिरमा अरु केही छ भने कहिल्यै नमर्ने कपाल मात्र । त्यस रगत मासुको पुत्ला के आफै हत्यारा बन्यो होला त ? पक्कै पनि हैन त्यसले जस्तो बातावरण पाउँछ त्यो पुत्ला त्यस्तै बन्दै जान्छ । यस्तो किसिमको बतावरण बन्न नदिने जिम्मा कस्को ?
के यो जिम्वारी राष्ट्र प्रमुखको हैन र ? मुर्ख केटीले तर्क प्रस्तुत गरी । त्यसबेलाको बातावरणले हत्यारा जन्माउँथ्यो भन्ने तँसँग के प्रमाण छ त । सबभन्दा ठूलो प्रमाण तिमी आफै हौ । "मुर्ख बोली"
अविनाशको आफ्नो श्मरण मात्र तिम्रो दिमागमा सरेको थिएन त्यस विचका सम्पूर्ण अविनासले पाएको वातावरण पनि श्मरणको रुपमा तिम्रो दिमागमा सरेको थियो । त्यस बातावरणले गर्दा तिमी कस्तो निच हत्यारा बन्यौ । तिमीले विर्सियौ तिमीले कति निर्दोषलाई मार्यौ । कति प्रहरीलाई मार्यौ ।
अब भन दोषी को हो त - तिमी कि अविनाश - खुल्ला आकासलाई कालो बाँदलले ड्याम्म ढाके झै भयो । मेरा वरिपरि निष्पट्ट अँध्यारो भए झै लागिरहेको थियो । तैपनि मानिस हुँ आफूलाई गलत भन्न सक्दिन थें । किनकि दोषी त सधैं अरु नै हुन्छन, दोषी "म" कहिल्यै भएको छैन, भएको देखेको पनि छैन र हुने पनि छैन
लेखन मितिः सन् २०१०
– मनोज बोहरा
अचम्म चकित भएँ
रोशन तामाङ (not verified) — Mon, 04/11/2016 - 13:25
अहिलेसम्म बिज्ञान को कथा नपढेको मैले पढेको यो कथा पहिलो बैज्ञानिक कथा हो । पढदा निकै खुल्दुली लाग्यो । वाह, क्या कल्पित भविष्य । साँच्चै नै , पदमा पुगेर मोटाउने गोबरबुद्धी भएका हरुलाइ हटाएर मास्टर माइन्ड भएका हरुलाई सत्ता दिए त नेपाल ले चन्द्रमाको ठेक्का लिने मात्र हैन, हडप्न पनि सक्ने थियो। सलाम छ आधुनिक कथाकारलाई ।
धन्यवाद ! तपाईहरुको माया र
Manoj Bohara — Fri, 08/12/2016 - 16:35
धन्यवाद ! तपाईहरुको माया र स्नेहले मलाई लेख्नको लागि सदा थप उर्जा दिई रहनेछ ।